Kismaayo News » Dadkii ka dambeeyey dilkii Dr. Axmed Xaaji C/raxmaan oo la daahfuray(Sawiro)
Dadkii ka dambeeyey dilkii Dr. Axmed Xaaji C/raxmaan oo la daahfuray(Sawiro)
Kn:Guddiga madaxa banaan ee u xil-saarnaa baaritaanka dilkii sanadkii hore Boosaaso, loogu geystay Dr. Axmed Xaaji C/raxmaan, ayaa soo saaray warsaxaafadeed ay shaaca uga qaadayaan magacyada dadkii ka dambeeyey dilkaas, qaar kamid ah oo gacanta lagu hayo, qaar baxsaday oo lagu raad joogo, isku jirka inta la hayo iyo inta baxsatay sawirradooda intii la heli karay iyo qaar kale oo aan dilka sheekha ka qeybqaadan hase yeeshee kamid ahaa amniyaadka ciidanka Alshabaab eek a howlgala magaalada Boosaaso, gacansaarna la lahaa kuwii dilay Sh. Dr. Axmed X. C/Raxmaan Alle ha u naxariistee. War saxaafadeedka guddiga madaxa bannaan oo warbaahinta loo kala diray ayaa u dhignaa sidan soo socota:
Gabagabadii guddiga madaxa-bannaan ee baarista dilkii sheekhu waxay uga mahadcelinayaan dowladda Puntland iyo laameheeda amniga sidii ay u soo qabqabteen gacan-kudhiiglayaashii Sheekha dilay, wuxuuna guddigu si gaara uga codsanayaa dowladda Puntland in ay caddaaladda horkeento dambiilayasha la hayo. Si guudna wuxuu guddigu uga codsanayaa Shacabka Puntland Dawladda Federalka Soomaaliya iyo Dowladda Somaliland iyo hay’adaha caddaaladda ee caalamiga ah inay gacan ka gaystaan qabqabashada dambiilayaasha aan weli la qaban. Waxaa kale oo guddigu u mahad celinayaa dhamaan dadkii faraha badnaa ee ku caawiyey hawsha baaritaanka iyo wixii la xiriiray.
Halkan hoose ka eeg sawirrada dhagarqabayaashii dilay Dr. Axmed intii la helay iyo qaar xiriir ay lahaayeen.